I-Semalt Expert ichaza indlela yokucoca iWebhu eneSobho esihle
Kukho idatha eninzi edlalwa kwelinye icala HTML. Kumatshini wekhompyutheni, iphepha lewebhu lumxube weempawu, abalinganiswa bombhalo kunye nebala elimhlophe. Into eyona nto esiya kuyo ukuya kwiphepha lewebhu ngumxholo kuphela ngendlela efundwayo kuthi. Ikhompyutheni ichaza ezi zinto njengamathegi e-HTML. Into eyenza ihlule ikhodi eluhlaza ukusuka kwidatha esiyibonayo isofthiwe, kulo mzekelo, zethu izikhangeli. Amanye amawebhusayithi afana ne-scrapers angasebenzisa le ngcamango ukuba atyathele umxholo wewebhu kwaye uyisindise ukusetyenziswa kamva.
Ngolwimi olucacileyo, ukuba uvula idokhumenti ye-HTML okanye ifayili yomthombo kwiphepha lewebhu, kuya kubakho ukufumana umxholo okwangoku kwiwebhusayithi ethile. Olu lwazi luya kuba kwindawo ephathekayo kunye nekhowudi eninzi. Yonke inkqubo ibandakanya ukujongana nomxholo ngendlela engacwangciswanga. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ukwazi ukuhlela le ngcaciso ngendlela echanekileyo kwaye ufumane izixhobo ezincedo kwiikhowudi yonke.
Kwiimeko ezininzi, abaqingqiweyo abawenzi umsebenzi wabo ukuze bafeze umtya we HTML. Ngokuqhelekileyo kukho inzuzo ekupheleni apho wonke umntu ezama ukufikelela. Ngokomzekelo, abantu abaqhuba imisebenzi ye-intengiso ye-intanethi bangadinga ukufaka imicu ekhethekileyo njengomyalelo-f ukufumana ulwazi kwikhasi lewebhu. Ukugqiba lo msebenzi kumaphepha amaninzi, unokufuna uncedo kwaye kungekhona nje ubuchule bomntu. Ii-scrapers zewebhu ziyi-bots ezinokutshatyalaza i-website kunye namaphepha angaphezu kwezigidi kwimizuzu yeeyure. Inkqubo yonke idinga indlela elula yokucinga inkqubo. Ngezinye iilwimi zeprogram njengePython, abasebenzisi banokwenza ikhowudi abanye abakhenkethi abangayifaka idatha yewebhusayithi baze bayilahle kwindawo ethile.
Ukuqhawula kungaba yinkqubo eyingozi kwiwebhusayithi ezithile. Kukho iinkxalabo ezininzi ezijikelezayo malunga nokusemthethweni. Okokuqala, abanye abantu bacinga ukuba ulwazi lwabo luyimfihlo kwaye luyimfihlo. Le nto ithetha ukuba izinto zokukhuphela i-copyright, kunye nokuvuza kwemimandla ekhethekileyo, kunokuthi kwenzeke xa kwenzeka. Kwezinye iimeko, abantu bakhuphela i-website yonke yokusebenzisa ngaphandle. Ngokomzekelo, ekudlulileyo kwangoko, kwakukho ityala le-Craigslist kwiwebhusayithi ebizwa nge-3Taps. Le sayithi ibhala umxholo wewebhusayithi kwaye iphinda iphinde ihlaziywe uluhlu lwezindlu kwiindawo ezihlongozwayo. Kamva bahlala ne-3Taps behlawula i-$ 1,000,000 kwiindawo zabo zangaphambili.
BS iyisethi yezixhobo (uLwimi lwePython) njengemodyuli okanye iphakheji. Ungasebenzisa umsila omnandi ukukrazula iwebsite kumaphepha ewebhu kwiwebhu. Kuyakwazi ukukrazula isayithi kwaye ufumane idatha kwifom ehleliweyo ehambelana nomphumo wakho. Unako ukuphazamisa i-URL uze usethe iphethini elithile kuquka ifomathi yethu yokuthumela. Kwi-BS, ungathumela ngaphandle kweefomathi ezifana ne-XML. Ukuze uqalise, kufuneka ufake ifayili efanelekileyo ye-BS kwaye uqale ngeendlela ezimbalwa zePython. Ulwaziso lwenkqubo lubalulekile apha.